laacib » Taageere Kooxda Atletico Madrid Ah Oo Iska Horkeenay Jamaahiirta Real Madrid Iyo Goolhaye Thibaut Courtois Isaga Oo Keenay Muuqaal Aflagaado Ah Oo La Qabtay 2013 Kii.
Haddii jamaahiirta laacibkii Barcelona ay goolhaye Thibaut Courtois ugu maadsadeen waxyeeladii ka soo gaadhay Lionel Messi isla markaana ay goolhayaha ree Belgium si maad ah ugu soo dhaweeyeen La Liga, waxaa soo baxay taageere laacibkii Atletico Madrid ah oo iska horkeenay jamaahiirta laacibkii Real Madrid iyo goolhaye Thibaut Courtois.
Sida la ogyahay goolhaye Thibaut Courtois ayaa saddex xili ciyaareed oo guulaystay ku soo qaatay laacibkii Atlatico Madrid wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii muhiimka ahayd ee Atletico Madrid ka soo caawiyay ku guulaysiga koobka La Liga laakiin waxa uu taageero Atletico Madrid ahi soo bandhigay muuqaal waji gabax ku ah Thibaut Courtois oo uu ku aflagaadaynayo jamaahiirta Real Madrid.
Dhacdada muuqaalkan ayaa ahayd sanadkii 2013 kii markaas oo aanu Thibaut Courtois ka fikirayn in uu Real Madrid maalin ka soo muuqan doono wuxuuna isaga oo ku faraxsanaa guulihii kooxdiisii hore ee Atletico Madrid uu si aan la rumaysan karin ugu heesayaa erayo uu ku aflagaadaynayo laacibkii uu hadda ku biiray ee Real Madrid.
Waxaana maanta taas la mid ah in goolhaye Thibaut Courtois la horkeenay waxqaabo qashin ah oo uu ku hadlay sanadkii 2013 kii kaas oo uu hadda ka shalaynayo in uu erayo noocaas ah ka sheegay laacibkii uu heshiisa lixda xili ciyaareed ah u saxiixay ee Madrid.
Haddaba sida aad muuqaalka hoose ka daawan doonto waxa uu taageere Atletico Madrid ah oo ay ugu qoran tahay AtléticoFans uu soo bandhigay muuqaalka uu Thibaut Courtois ku aflagaadaynayo jamaahiirta laacibkii Real Madrid.
Dhinaca kale laacibkii Atletico Madrid ayaa ka fikiri doonta in ay sawirka Courtois ay ka jarto garoonkeeda cusub ee Wanda Metropolitano kadib markii uu ku biiray laacibkii ay sida wayn u xifiltamaan ee Real Madrid waxaana la ogaan doonaa haddii Courtois uu markiiba kooxdiisii hore ee Atletico Madrid uu kaga hor iman karo finalka UEFA Super Cupka.